Apple TV + waxay heshay xuquuqda buugga duufaanta Katrina | Waxaan ka socdaa mac
Apple TV + waxay xaqiijineysaa xuquuqda buugga Hurricane Katrina
Waxaanan sii wadaynaa kahadalka wararka laxiriira mashaariicda soosocota ee aan ku arki karno Apple TV +. Maanta waa markiisa si looga hadlo taxane yar oo cinwaankiisu yahay Shan maalmood Xuska, ee sheeko isku mid ah oo uu qoray Sheri Fink, oo ku guuleystay abaalmarinta Pulitzer, waxaana agaasime ka ahaa John Ridley (Winner OScar) iyo Carlton Cuse (Emmy Award Winner).
Shan maalmood Xuska ayaa ka sheekeynaya wixii ka dambeeyay duufaantii Katrina ee dhex martay New Orleans, masiibo dabiici ah oo sababtay kumanaan dhimasho ah Apple waxay ku tabarucday dhaqaale sida shirkado kale oo badan oo tiknoolajiyad ah.
Taxanahan yar ee buug-ku-saleysan wuxuu ka sheekeynayaa 5-tii maalmood ee ugu horreysay cisbitaalka New Orleans tan iyo markii ay Duufaantii Katrina dhulka dhigtay. Markay biyuhu kaceen, korantada ayaa bilaabatay inay xumaato kuleylkuna wuu kordhay. Dhakhaatiirta cisbitaalka waxaa lagu qasbay inay gaaraan go'aanno nolol iyo geeri ah oo iyaga sannado badan cidhiidhi gelin doona.
Wasaaraduhu waxay gaar u ahaan doonaan Apple TV + inkasta oo xilligan aan la ogeyn goorta. Haddii ay wax si sax ah u sameeyaan, oo ay doortaan magacyo waaweyn, adeegyadan cusub lahaan kara guul la mid ah ama la mid ah kaasoo lahaa inuu difaaco Yacquub.
Qoraaga buugga, Sheri Fink oo wax soo saare fulin la leh John Ridley iyo Carlton Cuse yaa mas'uul ka noqon doona qorista qoraalka iyo qabashada shaqada bandhigga. John Ridley ayaa ku guuleystay abaalmarinta Oscar ee Akadeemiyada Hollywood filimka 12 sano oo adoon ah qeybta ugu habboon ee la waafajiyay Screenplay. Carlton Cuse wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Emmy ee taxanaha Lost ku jira qaybta Soosaaraha Fulinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple TV + waxay xaqiijineysaa xuquuqda buugga Hurricane Katrina
Filimkii ugu horreeyay ee taxanaha Apple TV + Tehran ayaa hadda la heli karaa
Apple wuxuu sii daayay Trailer-kii ugu horreeyay ee "Long Way Up" Taxanaha Baaskiilka